Hogaamiyaha Al-Qacida Ayman Al-Zawahiri oo Al-Shabab ugu baaqay inay xoojiyaan dagaalada
Mogadishu Sabti 12 May 2012 SMC
Hogaamiyaha Al-Qacida Ayman Al-Zawahiri oo Al-Shabab ugu baaqay inay xoojiyaan dagaalada .
Cajalad maqal iyo m uuqaal ah oo uu soo diray hogaamiyaha ururka Al-Qacida Sh, Ayman Al-Zawahiri ayaa waxaa uu ujeediyay Xarakadda Al-Shabab ee Soomaaliya ka dagaalanta bahwadaagtana la ah Al-Qacida inay sii xoojiyaan dagaalka ay kula jiraan dawlada KMG iyo ciidamad Africanta ah ee caawinaya. Ayman Al-Zawaahiri waxaa uu cajaladiisaan cusub ku sheegay inuu aad ugu dhiiri galinayo Al-Shabab inaysan marnaba wax hakad ah galin dagaalada ay Soomaaliya ka wadaan ee ay kagala soo horjeedaan dawlada iyo ciidamada AMISOM waxaana uu intaa ku daray inay Al-Shabab ku garab taagan yihiin dagaalka. Cajaladaan maqalka iyo muuqaalka ah ee uu soo hogaamiyaha ugu sareeya ururka Al-Qacida oo muddo 14 daqiiqo ah soconaysa inteeda badan ah dar daaran iyo dhiira galin ku socota hogaanka Xarakadda Al-Shabab ayaa sidaasoo kale waxaa uu ugu baaqay in marnaba aysan wax wal wal ku abuurin duqeymaha ay wadamo Soomaaliya ka mid tahay ka wadaan diyaaradaha dagaalka ee Maraykanka oo uu tilmaamay inay yihiin kuwo wada qal qwal galin sida uu hadalka u yiri. "Libaaxyada Mujaahidiinta ah ee Shabab waa inaad xoojisaan dagaalka aad wadaan o isticmaala farsamooyin dagaal oo aad ku argagax galinaysaan cadawga" ayuu yiri hogaamiyaha Al-Qacida Sh, Ayman Al-Zawaahiri.
"In Maraykanku idiin duqeyyo haka cabsi qabina waayo waxay duqeeyaan Vietnam, Ciraaq iyo Afghanistan dhamaantoodna waa ay ku guul daraysteen haddana waa ay guul daraysan doonaan" ayuu sidoo kale yiri hogaamiyaha Al-Qacida. Waa fariintii labaad ee Al-Shabab kaga timaada ururka Al-Qacida iyo markii ay midoobeen, Al-Shababna hadda waxay wadaan weeraro ay ku qaadaan gobolada laga qabsaday iyadoona dhawaan Al-Shabab laga faro maroojiyay magaalooyin ku yaala bartamaha iyo koofurta Soomaaliya oo ay muddo ka arriminayeen.
Dagaalyahano aan Soomaali aheyn oo Al-Qacida ka tirsan ayaa la sheegaa inay ka garab dagaalamaan Xarakadda Al-Shabab, waxaana sidoo kale la sheegaa in qaar ka mid ah hogaanka Al-Shabab ay dalka Afghanistan kusoo qaateen tababaro oo ay Al-Qacida mar ka bar bar dagaalameen.